ရာသီဥတုသိပ္ပံပညာရှင်များသစ်ခေါက် Up ကို The Big သစ်ပင် - သတင်း Rule
ရာသီဥတုသိပ္ပံပညာရှင်များသစ်ခေါက် Up ကို The Big သစ်ပင်
သူတို့ရဲ့ သာ. ကြီးမြတ်အသက်အရွယ်နေသော်လည်း, ကြီးမားသော, အဟောင်းသစ်ပင်များသေးငယ်ထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်, ဖယ်ရှားပစ်ရန်သားငယ်များ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် လေထုထဲကနေ, ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသစ်တောများနှေးကွေးကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုစူးစမ်းကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောပါတယ်.
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်သည်သမားရိုးကျအမြင်ကဟောင်းနွမ်းလွှမ်းမိုး, ကြီးမားတဲ့သစ်ပင်များအပူ-trapping ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်စုပ်ယူအတွက်အတော်လေး unproductive များမှာ.
ထက် သာ. 400 သစ်ပင်တပင်မျိုးစိတ်လေ့လာ, ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးကြီးပွားသောပိုကြီးနှင့်အထက်နမူနာကြီးနှင့်ပိတ်မိနေအများဆုံးကာဗွန်, သိပ္ပံပညာရှင်တွေ့ရှိရ.
“လူ့စည်းမျဉ်းများအတွက်, ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်အရှိန်မြှင့်စောင့်ရှောက်လျှင်အဖြစ်က, အစားနှေး၏,” အမေရိကန်ဘူမိဗေဒ၏ပရောဖက်နာသန် Stephenson ကသို့ပြောသည် AFP သို့ Nature ဂျာ​​နယ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတွေ့ရှိချက်များ.
သစ်ပင်များကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုစုပ်ယူ (CO2) လေထုထဲကနေနှင့်၎င်းတို့၏စည်ထဲမှာကာဗွန်ကြောင့်သိုလှောင်, အကိုင်းအခက်အရွက်, ဤသို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူနွေးလာမှုနှုန်းနှေးကွေး.
ဒီသစ်တောတွေတစ်ဦးဒါခေါ်ကာဗွန်နစ်စေသည်, သူတို့ရဲ့အလှူငွေရာသီဥတု-ပြောင်းလဲမှု Saga မှာအကြိတ်အနယ်-အခြေအတင်ဆွေးနွေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်.
“ကျနော်တို့ပြီးသားအဟောင်းသစ်တောများငယ်ရွယ်သစ်တောများထက်ပိုပြီးကာဗွန်တွေကိုသိမ်းဆည်းကြောင်းသိ. ဒါပေမဲ့အဟောင်းသစ်တောတွေအားလုံးအရွယ်အစား၏သစ်ပင်များကိုမဆံ့ကြောင့်ရှင်းလင်းစွာအမြန်ဆုံးကြီးပွားသောသစ်ပင်များကိုနားမလည်ခဲ့, လေထုထဲကနေအများဆုံးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုဖယ်ရှား,” Stephenson ကပြောပါတယ်.
နိဂုံး, ဟုသူကပြောသည်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့သည်.
“လေထုထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်လျှော့ချမျာ​​းအတွက်, ပိုပြီးကြီးမားတဲ့သစ်ပင်များ သာ. ကောင်း၏!”
သူနှင့်လေ့လာအခြားသုတေသီများ 403 သစ်ပင်တပင်မျိုးစိတ်, ကနေယူဒေတာကို အသုံးပြု. 673,046 မှတ်တမ်းများခြောက်တိုက်ကြီးအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီသစ်ပင်များကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာတွဲ 80 လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က.
စည်းကမ်းချက်များ “ကြီးမားသော” နှင့် “သေးငယ်သော” သစ်ပင်မျိုးစိတ်မှဆွေမျိုးခဲ့ကြ — ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းရောက်ရှိသည်အထိဧရာ Sequoia ကြီးတွေစဉ်းစားမရစေခြင်းငှါ, 300 စင်တီမီတာ (120 လက်မ), အခြားသစ်ပင်များကိုအဘို့အကြီးမားတဲ့နမူနာသာဖြစ်နိုင်ပါသည်စဉ် 50 စင်တီမီတာ (20 လက်မ) ကျယ်ဝန်းသော.
အရင်းအမြစ်: AFP သို့
22259	0 ကာဗွန်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, သစ်တော, ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု, နာသန် Stephenson က, သဘာဝ (ဂျာနယ်), သစ်ပင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်ဘူမိဗေဒ
← သို့တိုင်ဒါဟာတယ်: ကိတ်မော့စ်ကိုဖွင့် 40 ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေစမ်းသပ် tethering အာကာသ Junk Up ကိုရှင်းလင်းဖို့ →